Apple dia mamolavola seho ivelany miaraka amina processeur tafiditra | Avy amin'ny mac aho
Apple dia mamolavola seho ivelany miaraka amina processeur A13 tafiditra
Toni Cortes | 24/07/2021 20:00 | tsaho
Apple dia miasa amin'ny endrika fampirantiana ivelany vaovao Pro Display XDR miaraka amina processeur. Hevitra tsara hanafahana ny Mac mifandray aminao amin'ny kajy sary. Midika izany fa mifandray amin'ny Mac mini tsotra ianao dia hanana toeram-piasana mahery vaika hanovana sary sy horonan-tsary, na hilalao lalao.
Ny olana dia ho tonga amin'ny vidiny. Raha ny efijery ivelany avy any Apple dia efa mendrika harena be dia be, tsy te-hieritreritra izay ho vidiny voalaza miaraka amin'ny processeur integrated sy Neural Engine aho. Ho hitantsika eo…
Ny fampisehoana ivelany Apple Pro Display XDR dia efa elaela no teny an-tsena, saingy mbola tsy misy ny tsaho momba ny kinova nohavaozina ao anatin'ny fotoana fohy. Saingy hita fa manandrana fisehoana ivelany vaovao miaraka amin'ny a i Apple Processeur A13 natokana ary koa miaraka Engine Neural.
Ny fampirantiana vaovao dia novolavolaina tamin'ny anarana codename J327, fa amin'izao fotoana izao, mistery ny pitsopitsony momba ny pitsopitsony teknika. Toa ity takelaka ity dia hanana SoC nataon'i Apple, izay amin'izao fotoana izao dia ny chip A13 Bionic, ilay mitovy amin'ny ampiasaina amin'ny tsipika iPhone 11.
Miaraka amin'ny puce A13, ny fampirantiana ivelany dia manasongadina ny Neural Engine, izay manafaingana ny asa fampianarana ho azy. Ny fampisehoana ivelany toy izany miaraka amin'ny SoC natokana dia mety ho maodely vaovao hisolo ny ankehitriny Pro Display XDR.
Azo antoka fa hevitra tsara izany. Manana CPU / GPU mifangaro amin'ny fampiratiana ivelany dia afaka manampy ny Macs hamoaka sary avo lenta nefa tsy mampiasa ny loharano rehetra ao amin'ny processeur anatiny Mac.
Apple dia afaka nanambatra ny herin'ny fampisehoana SoC miaraka amin'ny processeur an'ny Mac mba hanomezana fampisehoana bebe kokoa amin'ny fampandehanana asa be dia be. Ny mety hafa dia ny fampiasana an'ity SoC ity hanampiana fampiasa marani-tsaina amin'ny Pro Display XDR, toy ny AirPlay.
Tsy fantatra ny fandrosoan'ny tetikasa, ary raha havoaka tsy ho ela amidy na mbola fotoana tokony hahavonona azy. Hihaino tsara ireo tsaho vaovao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Apple dia mamolavola seho ivelany miaraka amina processeur A13 tafiditra
Lahatsary vaovao amin'ny Apple Watch misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny mpampiasa azy